South Korea | Tripmee
EUR € ALL £ Category: South Korea သင့်ရဲ့ သဲကန္တာရ အသေးစား စွန့်စားခန်းအတွက် သဲသောင်ပြင် ၅ ခု
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံက သွားလည်ဖို့မကောင်းကြောင်း ပြသနေတဲ့ (၁၄) ချက်
South Korea no comment
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံက ပျင်းစရာကောင်းတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုပါ။ လူတွေဘာလို့ အဲ့ဒီ့ကို သွားလည်နေကြလဲဆိုတာ ကျွန်တော် နားမလည်နိုင်ပါဘူး။ ဘာလို့သွားမလည်သင့်လဲဆိုတာပြဖို့ ကျွန်တော့်မှာအချက် (၁၄) ချက်ရှိပါတယ်။ 1. တောင်ကိုရီးယား ပန်းခြံတွေမှာ လမ်းပျောက်တတ်ပါတယ်။ Lotte World ပန်းခြံက သွားလည်ချင်စရာမကောင်းပါဘူး။ မီးတွေကမှိန်ပြီးတော့ နေရာကျယ်ပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာလဲ ဘာမှမရှိပါဘူး။ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး Indoor Theme Park ဖြစ်ပေမယ့် မိသားစုနဲ့သွားလည်ရင်လည်း ပျော်စရာကောင်းမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ 2. မြို့ရဲ့အထင်ကရနေရာတွေကလည်း သာမန်ပါဘဲ။ နမ်ဆန်တာဝါက အချစ်ကိုတန်ဖိုးထားသူတွေအတွက်တော့ ပျော်စရာကောင်းတဲ့နေရာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒါ ၂၀၀၀ခုနှစ်မှာ ထားခဲ့သင့်ပြီလေ။ သော့ခလောက်တွေကို တာဝါပေါ်မှာထားခဲ့ပြီး သူတို့ရဲ့အချစ်ကိုသစ္စာဆိုကြတယ်။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ပုံမှန်ပါဘဲ။ ပျော်စရာလဲမကောင်းသလို အချစ်မရှိလို့ ရင်လဲမခုန်ပါဘူး။ 3. နေထွက်ပုံရှုခင်းတွေကလည်း စောင့်ကြည့်ရတာ မတန်ပါဘူး။ Jeju ကျွန်းမှာရှိတဲ့ […]